Uxinzelelo kwintlanzi: Iimpawu | Ngeentlanzi
Njengoko besesitshilo ngaphambili, thina bantu sisoloko sichanabeka kwiimeko ezisibangela uxinzelelo oluninzi, kwaye nangona kubonakala kungaqhelekanga, izilwanyana zethu zasemanzini nazo zinokuhlangabezana Iimvakalelo zoxinzelelo, ethi xa ingalawulwa ibangele iintlobo ezahlukeneyo zezifo kwanokufa.
Xa unezi izilwanyana kwi-aquarium yakhoNgokuqinisekileyo iintsuku nje ezimbalwa ziya kwanela ukuba uqaphele ukuba isilwanyana ngasinye siziphatha ngendlela eyahlukileyo nengafaniyo, eminye umzekelo inokuhlala iphantse ingahambi, ngelixa ezinye zingayeki ukudada kulo lonke elase-aquarium, kwaye abanye banokuzinikezela ukuphumla emazantsi ngelixa abanye bekwenza ngaphezulu.
Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuqala zigcine ngononophelo, ukufunda ukwazi intlanzi nganye ohleli kuyo echibini lakho, ngale ndlela uya kuba nakho ukuqinisekisa ukuba kukho into engaqhelekanga eyenzekayo kwisilwanyana sakho kuba indlela esebenza ngayo kunye nokuziphatha kwayo iya kwahluka kule nto ibiziphethe ngayo ngethuba elingakanani ubukele.
Nangona kunjalo zikhona ezinye iimpawu ngokubanzi Baza kukubonisa ukuba isilwanyana sakho siphantsi koxinzelelo, umzekelo, ingaqala ukwala ukutya, uya kuqala ukukubona ngaphezulu uzama ukuphefumla uvule umlomo, iya kudada ngokungaqhelekanga okanye izame hlala kude nezinye izilwanyana. Ngokumalunga notshintsho lomzimba, ngokuqinisekileyo ungaqala ukuqaphela ukuba amaphiko abo ayalunywa okanye onzakele, okanye kukho ubukho befungus okanye iiparasites emzimbeni wabo. Kubalulekile ukuba uqaphele kuzo naziphi na kwezi mpawu ukuze uthathe amanyathelo afanelekileyo okhuseleko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Uxinzelelo kwintlanzi: Iimpawu
isaphulelo sokuthenga sitsho
Enkosi ngolwazi kodwa oko kuyacaca kwaye kuyaziwa ngabahlali bamanzi
Phendula kwi-betta crountail